သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းဟာ သွေးကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တာသင်သိပြီးပြီလား? - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
Health Articleသွားဖုံးသွေးယိုခြင်းဟာ သွေးကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တာသင်သိပြီးပြီလား?
သွေးကင်ဆာ (Leukemia) ဆိုတာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သွေးဖြူဥတွေ ထုတ်လုပ်မှုများပြားခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကင်ဆာတစ်မျိုးပါ။
သွေးကင်ဆာ (Leukemia) လူနာတွေဟာ အမြဲတစေမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ရောဂါကူးစက်လွယ်ခြင်း နဲ့ သွားဖုံးသွေးထွက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ သွေးခြေဥခြင်းအစရှိသော သွေးဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပြသတတ်ပါတယ်။သွေးကင်ဆာ (Leukemia) ကို ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်ပေါ်မူတည်ပြီး (၂) မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Myeloid Leukemia: ရိုးတွင်းချင်ဆီမှာရှိတဲ့ Myeloid Cells တွေအထွက်များရာကနေ သွေးထဲကိုပျံ့နှံ့သွားတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။
Lymphoid Leukemia: Lymphocytes လို့ခေါ်တဲ့ သွေးဖြူဥတစ်မျိုးမှ စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါကင်ဆာနှစ်မျိုးလုံးကို Genetic Cancer Screening Test နှင့်ဖြစ်စေ၊ သွေးစစ်ပြီးဖြစ်စေ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ပါတယ်။
ကုသနည်းအနေနဲ့ကတော့ (၃) မျိုးရှိပါမယ်။
Chemotherapy: ဒါကတော့ Chemo လို့ လူသိများတဲ့ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းပါ။ သောက်ဆေးရော အကြောဆေးပါရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနာအနေနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလဲခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Targeted Therapy: ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးနဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုပဲရွေးပြီး ဖျက်ဆီးတဲ့ ကုသနည်းပါ။ (ဥပမာ။ ။ Tyrosine kinase inhibitor ဆေးဟာ နာတာရှည် သွေးက်ငဆာ (Leukemia) ရောဂါကိုကုသတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။
Stem Cell Transplantation: ဒီကုသနည်းကတော့ သွေးကင်ဆာထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ခြင်းမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ လူနာရဲ့ ဆွေမျိုးမှ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီအလှူခံပြီး လူနာထံ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပင်မဆဲလ် (Stem Cell) အသစ်တွေရရှိနိုင်ျွှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီလဲလှယ်ခြင်းလို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။
ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီးမှာတော့ သွေးကင်ဆာလူနာတွေကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးအောင် Targeted therapy ကိုအသုံးပြုပြီးကုသပေးပါတယ်။ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီလဲလှယ်ဖို့လိုအပ်လာရင်လဲ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။